Filipina: Arahi-maso ny Artistan’ny Firenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Septambra 2009 6:46 GMT
Vao nanamarina ny Tafika an-dranomasina Filipiana fa iray amin'ny olony ilay lehilahy tratra tamin'ny 17 Septambra nitondra tany ivelany ny fanazarantenany ka nihaodihaody manodidina ny tranon'i Bienvenido Lumbera, poeta nahazo loka, mpilalao teatra, ary mpanao fanamarihana haisoratra.
Manontany i Wonderer.wanderer , “Inona ny zavatra tadiavin'ny Tantsambo ao amin'ny Mpanakanto Nasionaly?” Mamaly ny ao amin'ny Midfield fa efa miova ho entin'ny polisy izao ny firenena:
Tsy misy azo tsoahina ankoatra izao, raha manaiky ny Tafika an-dranomasina Filipiana, fa misy tetikasam-panaraha-maso mihatra amin'ny Artistan'ny Firenena nandrombaka ny loka Magsaysay dia i Bienvenido ‘Bien’ Lumbera amin'izao fotoana izao.
Miala tsiny ny lehibe fa: “Asa fanazaran-tena fotsiny io.”
Tsy manadio ny lainga satria toa misy fifandraisany amin'ny hetsika nandraisan'i Lumbera Artistan'ny Firenena anjara mavitrika manohitra ny ‘dagdag-bawas’ ataon'ny Malacanang izao.
Mibaribary ny hafatra satria vao haingana loatra: tsy voaaro isika any an-tranontsika raha mahasahy manana fijery mifanohitra amin'ny an'ny fitondrana miramila isika.
Mitana ny lohalaharana amin'ny tsy fanajana zon'olombelona taorian'ny fitondrana jadon'i Marcos ny fitondran'i Gloria Macapagal-Arroyo. Araka ny fanisan'ny fikambanan'ny zon'olombelona Karapatan dia anarivony ny vono olona ara-politika ary mihoatra ny roanjato ny fampanjavonana olona ho tsy hita popoka nanomboka hatramin'ny nandraisan'i Arroyo ny fahefana tamin'ny taona 2001.
Nandefa indray mandeha ny matoan-dahatsoratry ny gazety mivoaka isan'nadro ao an-toerana kosa ny Vondrona Sendikaly Filipiana ao amin'ny bolongany:
Asam-pitsikilovana atao amin'i Lumbera, na raha tenenina amin'ny fomba hafa dia fomba hafa fampitonena. Na dia teo aza ny fahatsora-pon'ny mpitondra tenin'ny manam-pahefana dia tsy afaka ny hieritreritra io tranga io ho toy ny “sampona” ny vahoaka, na (araka ny fomba filazan'i Eduardo Ermita azy) hoe kisangisangy fotsiny; tena zavatra anisan'ny matotra izy ity—satria naka lesona avy amin'ny traikefa mampalahelo isika, nandray ny baiko mivantana tao Malacañang ny mpiasan'ny sampam-pitsikilovana miaramila: mpitsikilo avy amin'ny vondrona mitam-piadiana tsy miankina.
Amin'ny teny mazava no nanoloran'ny The Construct hevitra fa tokony hijery ny horonantsarin'i James Bond sy ny horonantsary miresaka fitsikilovana hafa koa ny miaramila amin'ny fanazarantenany:
Fa ahoana ary no nahafahan'izy ireo ho afaka ho ao amin'ny tafika an-dranomasina? Raha fantarina ny lazan'ny Tantsambo Filipiana, tsy mahay mitsoaka ve ilay lehilahy? Tsy zava-tsotra indrindra amin'ny lesona ve ny mitsongo dia (farafaharatsiny any amin'ny sekoly fianarana mitifitra)? Hafetsifetsena kely tahaka ny hoe mitondra faktioran-jiro na manamarina ny kaontera no mody atao dia tsy misy na inona na inona ho azo kianina. Ny tiako lazaina izany dia hoe tsy maintsy misy ny antony sy fomban'ny miaramila hijerena ny manokana ny karazan'olona toa an'i Dr. Lumbera.
Nampitandrina ny Rising Sun hoe:
Rariny ny an'i Lumbera raha miahiahy izy ao anatin'izao tontolo feno fanosihosena ny zon'olombelona izao. Tsy mijanona amin'ny fakàna sary na fandraisana ny feon'ny zavatra atao izay arahi-maso ny asan'ny miaramila. Mety ho izany no fanombohan'ny fakana na famonoana olona ataon'ny miaramila nozarina tamin'ny kolontsaina tsimatimanota.
28 Febroary 2021Azia Atsinanana